I-Technicolor - i-PostWorks - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni We NAB Show - NAB Show LIVE
Ikhaya » Imibhalo yokulondolozwa kwe-Tag: Technicolor - PostWorks
Tag Archives: I-Technicolor - I-PostWorks
I-Technicolor PostWorks Iqedela Ukuhlolwa Kwamafilimu ayisishiyagalombili emkhosini wamafilimu waseNew York
I-New YORK- Amafilimu ayisishiyagalombili ahlolwa kwi-55th New York Film Festival athola izinsizakalo zokukhiqiza ngemuva kweTechicolor PostWorks New York. Phakathi kwazo kubalwa ifilimu likaWoody Allen Wonder Wheel, ukukhethwa ebusuku kokuvala komkhosi. Ezinye zihlanganisa Ukukhetha Okukhulu kwesiteji iFlorida Project, iLady bird kanye ne-Meyerowitz Izindaba (Ezintsha Nezikhethiwe), kanye nezinto eziphathelene nombhalo u-Arthur Miller: Umlobi, ...
U-Sam Daley we-Technicolor PostWorks uphendula Ngokumnyama nokumhlophe Ukubukeka kwe-Horror Tale "Amehlo Omama Wami"
Ifilimu ethusayo uStylisily imaka kuqala komqondisi uNicolas Pesce; UCinematologist uZach Kuperstein uqokelwe umklomelo ozimele we-Independent Ghost Award. I-New YORK- Isici sokudonswa kombhali sikaMqondisi-kaNjingalwazi uNicolas Pesce, i-The Eyes of My Mom, esiqediwe kwaTechicolor PostWorks New York, siyindaba emnandi kabi yowesifazane osemusha obangwa nosizi lobuntwana. Ifilimu igcwele izikhathi ezithinta inhliziyo, zenziwe zonke ...
I-Technicolor PostWorks Iqoqa Umhlaba Oshintshayo Eminyakeni "Yokuphila Yengozi" kaNat Geo
Umbala wezinhlamvu u-Anthony Raffaele ubuciko obuhlukile abukele uchungechunge lwamadokhumenti ekushintsheni kwesimo sezulu. I-NEW YORK- Njengamanje ihamba nge-National Geographic Channel, uchungechunge lwamadokhumenti I-Years of Living Ngengozi nje yabuyela kuTechnicolor PostWorks New York ukuqedela iziqephu ze-1-hour ezihlanganisa isizini sayo yesibili. Idalwe ngabakhiqizi bezingu-60 Amaminithi uJoel Bach noDavid Gelber, lo mdlalo won ...
U-Technicolor PostWorks 'uJoe Beirne noMathewu Schneider bezokhuluma eMcimbini we-Pre-NAB Avid
I-New YORK- I-Technicolor PostWorks Isikhulu sezobuchwepheshe i-New York Chief Joe Beirne kanye noMqondisi wezobuchwepheshe uMatthew Schneider bazonikeza izeluleko ngokusebenzisana ne-4K kanye nabezindaba ze-HDR esimisweni esikhethekile se-Avid Customer Association's The future in Motion Conference eLas Vegas. UBeirne noSchneider bazoxoxa ngamasu wokuphatha amaphrojekthi we-4K ngenqubo engaxhunyiwe ku-inthanethi, eku-inthanethi nasekuqedeni ...
I-Technicolor PostWorks ibhekene neNew New and Returning Fall Series
I-NEW YORK-Technicolor PostWorks inikezela ngezinsizakalo zokukhiqiza ngemuva kwenani elisha lokubuyela emuva elihambisa ukuwa. Zibandakanya iziboniso ezilindeleke kakhulu ezivela ku-ABC, IFC, Netflix, i-Amazon, i-USA ne-Showtime. I-Quantico, umdlalo wobugebengu ovela ku-ABC mayelana ne-FBI encane uthola ukuqeqeshwa esikhungweni saseQuantico eVirginia. I-Technicolor PostWorks inikeza ukuhambisana okuhleliwe nokuhlelwa kombala; UMike Nuget, umhleli ohambisanayo; ...
I-Technicolor PostWorks Isebenzisana noKen Burns noDaniel J. White ekubuyiselweni kwe- “The Civil War”
I-Landmark PBS yedokhumenti iphinde yaqanjwa kabusha kwi-4K yokuphindwaphindwa kwe-25th yeminyaka engu-rebroadcast nokukhululwa kwe-Blu-ray. I-New YORK - Lapho umbhalo ka-Ken Burns wehora le-11 we-War War uqala i-PBS e-1990, wabeka izindinganiso ezintsha zemibhalo yethelevishini ngomlando wayo omangazayo ngokumangazayo, oshubile futhi odabukisayo wenhliziyo yengxabano ebabazekayo phakathi kweNyakatho neNingizimu. Ukusebenza ngaphansi kokuqondisa kweBurns ...
Ama-Technicolor PostWorks asiza uDavid Simon Phinda ama-1980s Yonkers we-HBO "Ngibonise Iqhawe"
I-New YORK — Ukukhiqizwa kwe-Show Me a Hero, idrama entsha ye-6-part edlala ku-HBO kulenyanga, esanda kuhlanganiswa e-Technicolor PostWorks New York. Indlu yeposi yenziwa ngobuningi bama-dailies, ukuguqulwa kokuhlelwa, ukufakwa kombala wokugcina nokuhanjiswa. Kuphinde kwahlinzeka nokuhlanganiswa komsindo ngohlelo lwayo lwePostWorks. Kuvela kuDavid Simon, omsebenzi wakhe wangaphambilini ne-HBO ufaka uchungechunge oludume ngokuthi iTreater ne ...
I-Technicolor PostWorks Usekela i-TIFF World Premieres
I-New YORK - I-Technicolor PostWorks New York inikeze izinsizakusebenza zokukhiqiza ngemuva kwamafilimu amane enza umdlalo wawo wokuqala eToronto International Film Festival ngenyanga ezayo. UFreeheld (Isethulo seGala), siqondiswa nguPeter Sollett (Uhlu lwadlalwayo lukaNick noNorah olungapheli), izinkanyezi uJulianne Moore, u-Ellen Page, uSteve Carell noMichael Shannon endabeni eyiqiniso yamaphoyisa aseNew Jersey agula ngokugula afuna ...
I-Technicolor PostWorks Iqeda Izici namaDokhumenti e-Tribeca Premieres
I-New YORK — Iqhubeka nokuxhaswa kwayo okude kokukhula kwabasebenza lefilimu abasafufusa, i-Technicolor PostWorks New York inikeze izinsizakusebenza zokukhiqiza ngemuva kwamafilimu ambalwa ahamba phambili kwi-Tribeca Film Festival yale nyanga. Lesi sikhungo sinikeze ukuhlelwa kokuhlelwa, ukufakwa kombala, imiphumela yokubuka, i-DCP kanye nokulethwa kweDixieland, idrama evela kumqondisi uHank Bedford esibonelweni sakhe sokuqala. Ifilimu, emayelana nabathandi bezinkanyezi abanqamule ekubambeni phansi kwe ...
I-Technicolor PostWorks isekela amaFilimu e-SXSW
Isikhungo sinikeza izinsizakalo zokuthunyelwa kwamafilimu ayisithupha emkhosini, kuhlanganise nama-premieres amane omhlaba. I-NEW YORK- I-Technicolor PostWorks inikeze ngezinsizakalo zokukhiqiza ukuthunyelwa kwamafilimu ayisithupha e-South By Southwest Film Festival (SXSW). Bafaka ama-Headliners uSteve Imisebenzi: Indoda Emshini, e-world premiere yayo, naseManglehorn, e-US premiere. Ukuhlola futhi yi-Adult Beginners (Festival Favorites / US ...
I-Technicolor-PostWorks Ilungiselela Amafilimu eSundance
Isikhungo sihlinzeka ngezinsizakalo zokuthumela amafilimu amaningi aqala ukukhokhisa ePark City, kufaka phakathi “Abayizinkulungwane Eziyishumi,” “Z kwaZachariya” no-Alex Gibney's Doc “Going clear.” I-New YORK— iTechicolor-PostWorks New York inikeze ngemisebenzi yokukhiqiza ngemuva kwamafilimu amaningi izindondo zabo zomhlaba wonke kulo nyaka weSundance Film Festival. I-Technicolor-PostWorks ngumthengisi Othandwayo Wezobuchwepheshe ku-The Sundance Film Festival. Umkhosi ubekelwe ...
I-Technicolor-PostWorks Iqhaza Kwezimpawu Eziyisishiyagalombili zeGolide Eqokiwe kanye Nemibukiso ye-TV
“Uhambo Olungamakhulu Amakhulu,” “Ukungena emahlathini,” “uNowa” kanye no- “Detector Weqiniso” bephakathi kwabaphakanyiselwe ukukhetha lesi sikhungo sokwenza izinsizakalo zangemva kokukhiqiza. I-New YORK - I-Technicolor-PostWorks New York inikeze ngemisebenzi yokukhiqiza ngemuva kwezithombe ezihlanu ezinyakazayo nemibukiso yethelevishini emine eqokelwe ama-2015 Golden Globe Award. Imibukiso iqoqe isamba sokuphakanyiswa kwe-18. Abaphumelele eGolden Globe bazomenyezelwa ngoJanuwari 11th e ...
I-Mastronardi ijoyina i-Technicolor - i-postWorks njenge-SVP ye-Sales Feature
I-New YORK — iTechnicolor-PostWorks New York iqoke owayengumphathi we-Kodak, uRobert Mastronardi esikhundleni sokuba yiPhini likaMongameli Omkhulu, uHlelo Lokuthengisa. Ngeqhaza lakhe elisha, iMastronardi izogxila ekwandiseni izibopho zalesi sikhungo kwizitudiyo nakubakhiqizi abazimele, futhi ikhule nengxenye yayo ekubonisweni kokukhishwa kwamafilimu ngemuva. Uthatha okuthunyelwe kwakhe okusha ngoJanuwari 2, 2015. Umakadebona wezimboni zeminyaka engu-30, uMastronardi uletha ...
I-Technicolor-PostWorks Yenza Izikhathi Zokukhangela I-“Stonehearst Asylum”
Isikhungo sokukhiqiza esisha seNew York sinikezela amasudi wokuhlela, ukufakwa kombala nezinye izinsizakalo zokuqedela ukuthokoziswa kwesitayela ngokusekelwe kudaba le-Edgar Allan Poe. I-New YORK - I-Technicolor-PostWorks New York ihlinzeke ngemisebenzi yezokukhangisa eyenziwa nge-Stonehearst Asylum, ifilimu entsha engabazisayo evela kuMqondisi Brad Anderson nakuMillenium Entertainment. Lesi sikhungo sinikeze ngezinhlelo zokuhlela nokwesekwa kokukhiqizwa futhi sasingathwa ...
I-Technicolor - I-PostWorks I-New York Isebenza Njengomsizi Osemthethweni we-Hamptons International Film Festival
I-New YORK — Ngokuhambisana nesiko layo elide lokusekelwa kwefilimu ezimele, iTraicolor-PostWorks New York isebenza njengoMhlinzeki Osemthethweni wePosini kwiHamptons International Filamu. Umphakeli osezingeni eliphezulu waseNew York wezinsizakalo zokukhiqiza zezithombe ezinyakazayo nethelevishini, lesi sikhungo sisingatha ukuqedelwa kokuhlelwa kanye nokulethwa kwemidiya ehlukahlukene ezobukwa ngaphambi kwe ...
Ikhasinkomba 1 of 212	»